जे नहुनु थियो त्यहि भयो ! राष्ट्रपति सी ले लिए कडा एक्सन, थाले यस्तो तयारी, अबे के गर्छन ओली ? — Imandarmedia.com
काठमाडाैँ । नेपालमा पटकपटक बाह्य हस्तक्षेप हुदैँ आएको छ । नेपालका नेताहरु विदेशीको इसारामा चल्ने गरेको आरोपहरु समेत लाग्दैँ गरेका छन् । यसैबीच, चीनले नयाँ दाउ अघि सारेको विश्लेषकहरु बताउछन् ।
नेपालको कुटनीतिमा असफल भएको भन्दै चीनले नेपालका लागि चिनियाँ राजदुत होउ यान्छीलाई फिर्ता बोलाउने भएको छ । कार्यकाल सकिएपनि नेकपाको विवाद मिलाउन भनि एक वर्षदेखि प्रयत्न गरिरहेकी यान्छीलाई चीनले अब भने फिर्ता बोलाउने बहेको छ ।